Ilaalinta Spam: Tilmaamaha laga bilaabo Semptarka
Emails intooda badani waxay leeyihiin farriimo spam ee faylasha. Kala saarista emaylka spam ee kuwa ka yimid ilo macquul ah waa baahi muhiim u ah isticmaale kasta.
Xayeysiiska Spam waxaa ku jiri kara Trojans waxyeelo leh ama waxay isku dayayaan inay sameeyaan ficillo kale, kuwaas oo khiyaanaynaya dhibanaha soo bandhigaya hawsha loo yaqaan call-to-action action. Spammers waxay helayaan kumbuyuutarkaaga waxayna kuu soo diraan emails xayaysiisyo aadan jeclayn inaad aragto. Xaaladaha qaarkood, spammers waxay ku guuleysan karaan inay ku noqdaan nidaam kombuyuutar - us computer services company names. Waxtarkaasi wuxuu ku siin karaa iyaga si aad u hesho emails aad aaminsan tahay, taas oo ka dhigi karta inay noqdaan qof sharci ah. Xaaladaha kale, spammers waxay u diri karaan waxyaabo aan habooneyn carruurta oo ay ka mid yihiin filimmo.
Inaad ka fogaato spam waa in uu leeyahay qof shaqeeya internetka. Si aad uga fogaato ama u qaadatid spam, Lisa Mitchell, khabiir ka socda Semt , ayaa kula talinaya tallaabooyinka soo socda.
1. Isticmaal qalabka feylinta ee spam
Waxaa jira qaar ka mid ah xeeladaha software-ka ee anti-spam, kaas oo u adeega inay xakameyso waxyaabaha spam ka yimid kuwa aan garanayn. Muujiyeyaashani waxay sameeyaan baaritaan iyo ogaadaan fariimaha soo socda. Software wuxuu xakameyn karaa emails, kaas oo ku jira spam oo u oggolaanaya kuwa sharci ahaanta leh. Ku rakibidda software-ka xannibaadda waxay noqon kartaa wax saameyn ku leh xasilloonida boggaaga internetka iyo sidoo kale kordhinta qaar ka mid ah dedaalkaaga SEO.
2. Hayso cinwaanka emailka la tuuri karo
Dadka leh emayl shaqo ama email email, waa lagama maarmaan in la isticmaalo email shaqo oo bilaash ah..Spammers waxay awood u yeelan karaan in ay afduubaan shabakad iyo inay helaan emailada bogga internetka. Xaaladdan, waxay soo diri karaan farriimahooda kuwaas oo ku jira faylasha emails oo aan wax u dhimeynin macluumaadka qofka. Spammers waxay isticmaalaan xeelad sida jahawareerka, xayeysiinta, iyo xoriyada oo si dhib yar u dhaadhicin kara dhibbanaha.
3. Ha ku riixin xiriirada boostada spam
Xidhiidhkani waxaa laga yaabaa inuu fuliyo hawlaha waxyeellada leh sida cirbadaha miisaanka ama haya'dahaaga si aad u hesho khayaano xaasidnimo ah. Xaaladaha kale, xiriiriyayaashu waxay ku wici karaan lambarada casriga ah ee iyaga oo samaynaya shaqooyin sida dib-u-hagaajinta warshadaha fog.
4. Sifee qalabka SEO oo macquul ah oo shaki leh
Iyada oo ay udubdhexaad u tahay suuq-gashiga internetka, spammers waxay leeyihiin farsamooyin SEO ah oo waxtarka leh iyo waliba qalab badan. Waxay heystaan ​​guulo badan oo lagu hubinayo inta badan nidaamkooda, sida hababka suuq-geynta internetka. Spammers waxay leeyihiin qalab otomaatiko ah kuwaas oo ka caawin kara inay qaadaan kumanaan cinwaanno email ah.
5. Ha ku furin lifaaqyada boosteejada spam
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu helo weeraro ka timaadda Trojans waa in la furo lifaaqyada ay ku jiraan trojans. Kuwani waa qalabka hacker-abuurka ah ee leh shaqooyin gaar ah oo ay ku qabtaan kombiyuutarka dhibbanaha. Mid ka mid ah wadooyinka wadaaga ah ee la adeegsado spamers ayaa u diraya liis, taxad ama macluumaadka gawaarida foomka faylka waraaqaha boostada.
Qof kasta oo isticmaalaya kombuyuutarka ama telefoonka gacanta si uu u galo internetka, waa mawduuca spam. Emaylada Spam waxay ka imanayaan khadadka oo leh ulakac xun oo xaasidnimo ah oo ku wajahan bartilmaameedkooda. Iyadoo ku xiran baylahnimada iyo jaahilnimada dhibanaha, emayadahaan waxay xayiri karaan dhammaan sanduuqa. Waxay saamayn ku yeelan karaan sida ay u shaqeeyaan boggaga internetka oo ugu dambeyntii ka xadaan isticmaalaha. Ka fogaanshaha spam waa muhiim. Spam ma aha oo keliya in shirkadku ay ku dhacdo khasaaro laakiin waxay sidoo kale keeneysaa website. Waxaad ka hortagi kartaa weerarrada spam adigoo isticmaalaya tilmaamahan. Xaaladaha kale, waxaad awood u heli kartaa inaad ogaato emayl aad u xun oo ka fogow, sameynta spamerka ka sii daa emailkaaga.